Mon, Jul 6, 2020 at 5:05pm
काठमाडौँ, २१ जेठ । सरकारले विकास बजेटमा छुट्याएको केही रकम ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिदमा रकमान्तर गर्ने भएपछि संघीय संसद सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदका लागि ३३४ थान ल्यापटप खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो। खरिदका लागि आइतबार बोलपत्र आह्वान गरिएको समाचार नागरिक दैनिकमा छ। आर्थिक वर्षको अनित्ममा आइपुग्दा विकास लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नभएपछ सांसदलार्य ल्यापटप..
काठमाडौँ, २१ जेठ । आइतबार राति आएको भीषण हावाहुरीले बबई नदीको कुसुम्बाघाटमा निर्माणाधीन झोलुंगेपुलमा क्षति पुगेको छ । बर्दियाको मधुवन र बारबर्दिया नगरपालिकालाई जोड्ने बबई नदी कुसुम्बाघाटमा निर्माणाधीन झोलुंगेपुल हावाहुरीले बांगिएको छ । नटबोल्ट लट्ठामा कस्न नपाउँदै पुलको भाग माथि उठेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । पुलमा बिछ्याइएको प्लेट लट्ठामा कस्दै गर्दा हावाहुरी आएपछि क्षति पुगेको प्राविधिकले बताएका छन् । पुललाई सीधा..
पोलिटब्युरोअघि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने नेकपाको गृहकार्य
काठमाडौँ, २१ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पोलिटब्युरो गठन पहिल्यै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन टुंग्याउने गृहकार्य गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार साढे तीन घन्टा भएको छलफलमा दुई अध्यक्षबीच पोलिटब्युरो गठन हुनु पहिल्यै सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने समझदारी भएको हो । यसअघि पोलिटब्युरो गठनपछि मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने..
ओली-प्रचण्ड बैठक : ७७ वटै जिल्ला इन्चार्जमा सहमति, मंगलबार अनुमोदन
काठमाडौं, २१ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ७७ जिल्ला इन्चार्जमा सहमति जुटेको छ । सोमबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज टुंग्याउने सहमति भएको हो । मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकले यो विषयलाई अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ भने अन्य शीर्ष नेताको कार्यविभाजन बारे पनि छलफल हुनेछ । सचिवालय बैठकमा माधव नेपालको सहमति लिएर मात्र यो विषय टुंग्याउने..
सोलुखुम्बु घटनाबारे के भन्छ विप्लव नेतृत्वको नेकपा ?
काठमाडौं, २० जेठ नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारी सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्ने पार्टीको कुनै नीति नभएको स्पष्ट पारेको छ । सोमबार साँझ सो पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले एक विज्ञप्ति जारी गरी सो कुरा बताएका हुन् । प्रवक्ता प्रकाण्डले आइतबार सोलुखुम्बुमा आफ्नो पार्टीद्वारा प्रहरी चौकीमा आक्रमण प्रयास भएको भन्ने नियोजित र षडयन्त्रपूर्ण प्रचारवाजीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने पार्टीको..
२ अध्यक्षबीच असहमति बढ्दा नेकपाको सचिवालय बैठक सरेको सर्‍यै
काठमाडौँ, २० जेठ नेकपाभित्र कुन विभाग कसरी बनाउने र कसलाई नेतृत्व दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेताहरूको कार्यविभाजन र पोलिटब्युरो गठनको एजेन्डामा छलफल गर्न बोलाइएको नेकपा बैठक सरेको सर्‍यै छ । जेठ ३ मा भ्रातृसंगठनहरूको एकतालगत्तै बैठक बसेर कार्यविभाजन र पोलिटब्युरो गठनबारे छलफल गर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि बैठक बसेको छैन । शनिबारका लागि निर्धारित बैठक प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली..
कैलालीका आधा दर्जन सरकारी कार्यालय अझै पुनःस्थापना हुन सकेनन्
लम्की, २० जेठ सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाबाट विस्थापित भएका आधा दर्जन बढी सरकारी कार्यालय अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा कैलालीको सत्तीबाट विस्थापित भएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, खाद्य संस्थान, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट, चौगुर्दी छोटी भन्सार कार्यालय, अस्थायी प्रहरी पोष्ट चौगुर्दी, अस्थायी प्रहरी पोष्ट खक्रौला र सटही काउण्टरलगायतका कार्यालय अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । नेपालमा द्वन्द्व चर्किएपछि..
माग सम्बोधन नगरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने म्यानपावर व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं, २० जेठ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले तीन महिना भित्र आफूहरुको सम्पूर्ण माग सम्बोधन नगरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले आफूहरुको माग ३ महिना भित्र पनि सम्बोधन नगरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । संघले आफूहरुको माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै गत जेठ १७ गतेबाट २३..
उपसभापति विमलेन्द्र निधि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि डेनमार्क प्रस्थान
काठमाडौँ, २० जेठ नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि डेनमार्कमा हुने संसदीय निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो । डेनिस इन्स्टिच्यूट फर पार्टीज एण्ड डेमोक्रेसी (डीआइपीडी) को निम्तोमा उपसभापति निधि कोपनहेगन प्रस्थान गर्नुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा यही जुन ४ मा हुने निर्वाचनको अघिल्लो दिन स्थलगत अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ त्यस क्रममा उहाँले त्यहाँका मतदाता, युवा, महिलालगायतका..
फिदिम, २० जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सरकारी सेवा प्रवाह परिवर्तन हुने बताउनुभएको छ । प्रेस सङ्गठन पाँचथरले आज बिहान फिदिममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नागरिकले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै चित्त बुझाउने अवस्था नरहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले सरकारी सेवा प्रवाहलाई परिवर्तन गर्नसके मात्रै राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भूमि..
अन्तवार्ताको तरङ्गले नेकपामा खैलाबैला ! ओलीसँग रिसाए माधव नेपाल, होमवर्कमा जुटे ओली–प्रचण्ड
काठमाडौँ, २० जेठ । सोमबार विहान बस्ने भनिएको सत्तारुढ नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक अकस्मात स्थगित हुन पुग्यो । पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक अन्तवार्ताले तरङ्ग पैदा भएको छ । प्रचण्डको अन्तवार्तापछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि तनावमा रहेको बताइन्छ । नेकपाको झण्डै साढे ४ सय केन्द्रीय सदस्यहरुको मात्र नभई, स्थायी समिति र केन्द्रीय सचिवालयका अधिकांस नेताहरुको पनि..
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध गृहको अनुसन्धान, रोकियो भारत भ्रमण
काठमाडौँ, २० जेठ बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुख बैठकमा नेपालको परराष्ट्र नीति विपरित कार्य गरेको विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध गृह मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको छ। उनीसँगै बैंकक गएका प्रतिनिधिमण्डल अन्य सदस्यसँग सोधपुछ गरिएको छ। प्रारम्भिक छानिबनपछि गृह मन्त्रालय महानिरीक्षक खनालले राष्ट्रिय नीतिविपरित गई बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरुको प्रयास (बिमस्टेक) बैठकमा मत जाहेर गरेको निष्कर्षमा पुगेको हो। ‘सबै पृष्ठभूमि..
सांसदलाई लोक सेवाको जवाफ - कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन कानुन सम्मत
काठमाडौँ, २० जेठ । लोकसेवा आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको दाबी गरेका हुन् । जवाफमा मैनालीले भने, ‘लोकसेवा आयोग भावनामा बग्दैन, कानून हेरेर काम गर्छ, झूठा आरोप नलगाउनु भएको भए हुन्थ्यो..
Results 9755: You are at page 147 of 326